Umbono wakho ubalulekile: Umbono ngeDebian | Kusuka kuLinux
Umbono wakho ubalulekile: Umbono ngeDebian
Sibuyela ekulayisheni nesigaba: Umbono wakho ubalulekile, kulokhu nge-imeyili yomsebenzisi ogama lakhe lingu- Perseus.
1 UPerseus uyasitshela:
2 Kusuka kuLinux kuyaphendula:
Ngibingelela wonke amalungu e KusukaLinux, Ngiyakuhalalisela nge-blog (ingenye yezintandokazi zami ;-)) kulokhu ngithanda ukwazi umbono wakho ngayo.
Ngisebenzise I-Archlinux, Ama-PCLinuxOs y I-LMDE (ama-distros engiwaziyo ukuthi akhipha ukukhishwa noma afana nomqondo), umbuzo wami uthi, yikuphi kulawa ma-distros ama-3 afana kakhulu ne-debian? Angikaze ngiyizame ngokuthi 'iphelelwe yisikhathi kepha izinzile' (ngintshontshe le nkulumo kubagibeli: P).
Ngiyayithanda imiqulu enjenge-arch, njengoba ngithanda ukwazi ukuthi ngingaba namaphakeji asesikhathini futhi angifaneli ngilinde isikhathi eside ukuthi bafakwe kuhlu lwabo lwesoftware noma ukuthi baphume ekukhishweni okulandelayo (njenge-PCLinuxOS).
Uma unganweba lesi sihloko ngokuqhubekayo (ukuthi ungasifaka kanjani, yini nokuthi zingaki izinhlobo zezinguqulo ezikhona kanye nokwehluka kwazo, izindawo zedeskithophu, idatha yezobuchwepheshe, njll.), Kubonakala ngokucacile kokuhlangenwe nakho kwabo, kungaba kuhle. Kwazi bani, mhlawumbe ngithanda ukukuzama unomphela ;-).
Kusuka kuLinux kuyaphendula:
Okokuqala ngiyabonga kakhulu ngamazwi akho nge Kusuka ku-linux.
Ngokudabukisayo, kukhona okuthile okusobe ngokunganaki: Uma ngabe usebenzise Debian : D. Uma futhi usitshela ukuthi usebenzise I-LMDE (I-Linux Mint Debian Edition) Yebo, usuvele unayo ngaleso sikhathi. Siyakukhumbuza lokho I-LMDE inguqulo ye- I-Linux Mint okuncike ku- Cindezela / Ukuhlola kwe-Debian.
Mayelana nomusho waseBurjans ngingakutshela kuphela ukuthi kukhona ingxenye nengxenye. Konke kuncike ekutheni usesikhathini osifunayo. Debian inegatsha Iqinile (okuyilokho engicabanga ukuthi ama-burjans abhekisele kukho), igatsha Testing negatsha Sid. Ungafunda kabanzi ngalokhu lapha.
Endabeni yami ngisebenzisa Testing, futhi nginezinguqulo zakamuva (ezizinzile) zamaphakeji amaningi, isibonelo:
I-Turpial 1.6.5 ~ b6-1
Manje, kuyiqiniso ukuthi ayikho inguqulo ye- Debian wakhe Ukukhishwa kwe-Rolling bangaba kanjani I-Archlinux o I-PCLinuxOS.
Vele singakwazi ukubhekana nalolu daba ngokujula okungaphezulu, futhi uma ufuna, ungalanda ifayela le- PDF mayelana nokufakwa kwayo ongakuthola ku- lokhu okuthunyelwe. Kulo mhlahlandlela ungabona ukuthi ungafaka kanjani Squeeze Debian (igatsha lamanje elizinzile) nokuthi ungayenza kanjani ngokwezifiso eminye imininingwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Umbono wakho ubalulekile: Umbono ngeDebian
Ngiyabona ukuthi uPerseus akazange entshontshe wonke umusho kule ndatshana:
lapho ngithi futhi ngicaphune:
Kucace bha ukuthi abafana bakaDebian bafuna ukushiya ngemuva kwesibonakaliso esincane esithi 'Siphelelwe yisikhathi kodwa Esizinzile', ukusenza 'Sisesikhathini futhi sizinzile'.
Don't Angazi ukuthi ukhuluma ngani futhi ngendlela yeRAE oyenzayo kodwa awukwenzi .. Noma angazi ukuthi ngisisebenzisa kanjani isichazamazwi? 😕
"Has" is "to have"; futhi "do" ukwenza "ukwenza."
Futhi ngale ndaba, iqiniso kunzima ukukhononda ngoDebian uma usucacisiwe ngomehluko phakathi "kokuzinza", "ukuhlola" kanye no "sid". Ukuthi kusenza thina ososayensi abangewona amakhompiyutha sihlupheke, akukho kungabaza, kepha abantu abaqeqeshiwe benza umsebenzi omuhle ku-LMDE, benza izinto zibe lula kakhulu kithina.
Ngemuva kokuthi isibindi sizame ukungilungisa, bengingabaza (ngingaba nephutha, ngingumuntu). Angisona isazi soLimi lwaseSpain ngakho-ke ngaqala ukubheka, yize emakhasini engikwazi ukufinyelela kuwo angitholanga lutho. Ngifunde ngaphezudlwana ukuthi "ugongolo" lwe "do" lusetshenziswa esimweni sokuzibophezela, isibonelo: Yenza lokhu ngikuthumela kuwe esihogweni! 😀 Bese kuba yishumi nantathu, esimweni sendatshana Kunjani? Ngabe usebenzisa u- "has" noma "do"?
Ngiyazi, uthisha waseSpain wangicacisela. Isibindi sasiqinisile ¬¬
Embhalweni kufanele ithi, "usuvele ukwenzile" njengoba kubhekise "ekwenzeni" okuthile. Njengethiphu, "ugongolo" lungahlala luthathelwa indawo yi- "performs" esikhundleni se- "has", alunakushintshwa.
Isibonelo, esitatimendeni sakho awukwazi ukufaka esikhundleni se- "perform" njengoba ibingafundeka njengo: "already 'performs done", okungenamqondo.
Ngakolunye uhlangothi, uma uthi: "Yenza umsebenzi wakho wesikole", khona-ke uma ungakwazi ukufaka esikhundleni "yenza umsebenzi wakho wesikole."
Ngibonga amakilasi, into efanayo naleyo uthisha waseSpain angichazele yona hahaha ..
[Memo kimi: Kufanele ufunde kabanzi .. okuningi ...]
Ukuphela kwento engingayisho ngeDebian ukuthi lokho kungumbala omncane wamabhola ama-3 futhi ngincamela izikhathi eziyinkulungwane ukusebenzisa uHasefroch ogqekeziwe emigoqweni ye-Debian emhlophe yamabhola, angazi nokuthi lowo mthombo ovulekile uHasefroch usaphila kanjani
Woza ngokungathí sina
Angimthandanga ngenxa yokungabekezeleli kwakhe amaphakheji ngombhedo omncane orekhodiwe, ukube bekungengenxa yalokho ngabe ngihlala naye isikhashana.
Kokunye ngaleso sikhathi angizange ngilethe izinkinga zokuzinza futhi ijubane lalilihle impela
Kwiseva kubonakala kungumqondo omuhle kakhulu, njenge-BSD noma iSlackware.
Ukuze siqondane, uDebian ufana ne-blonde kanti i-Arch ifana ne-brunette, izintandokazi zami
Uma i-Debian ibifana ne-blonde, ibingayisebenzisi ngoba ngithanda ama-brunette. Uma ungachaza lokhu:
Ah, ukuthi ikhululekile ngo-100%, awufuni lutho ngokubhaliswa okuncane
Yebo, uDebian unazo zonke izinhlonipho zami, nokuningi uma bezama ukuzinza bobabili (njengoba igatsha elizinzile belilokhu likhona), futhi livuselelwe. Ngenkathi ngiyisebenzisa benginenkinga eyodwa kuphela futhi bekusegatsheni elingazinzile, yingakho ngihlala ngithi ukungazinzi kahle kwe-debian akuqinisekile. Kepha-ke, noma ngubani odidana nokuthile okuhlola noma okungazinzile, kufanele azi ukuthi yini okumele ayilindele noma okungenani alindele ukwehluleka kwesinye isikhathi.
Kusukela kokunye okuqinile njengesihlahla se-oki nangemva kwe-Arch, Debian. (Ngithanda i-gentoo, kepha ku-quilombo njengoba kusho ama-Argentina)
Yini okufanele uyenze ukuze iZarafa ingaphathi ukulethwa kwama-imeyili eZentyal?
I-Qt Project: ekugcineni i-Qt imahhala ngokuphelele futhi ingumphakathi